Nwoke nke Nwere Chineke maka Treasure — njem Lee - Official Site
Nwoke nke Nwere Chineke maka Treasure
Onye nwere Chineke maka akụ ya nwere ihe niile na One. Ọtụtụ ndị nkịtị akụ nwere ike na-agọ ya, ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ na-ekwe ka ha, na ọṅụ nke ha ga-otú n'obi na ha ga-adị mkpa ka ya obi ụtọ. Ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ọ ga-ahụ ha na-aga, otu mgbe otu, ọ ga siri ike tupu eche a mfu, n'ihi na ha na Isi Iyi nke ihe niile o nwere na One niile afọ ojuju, ihe ụtọ nile, niile ụtọ. Ihe ọ bụla o nwere ike hapụ o n'ezie dịghị ihe funahụrụ, n'ihi na ọ now nwere ya niile na One, na o nwere ya kpere, legitimately na ruo mgbe ebighị ebi.
A.W. Tozer, The arụ Chineke
keleyR • August 19, 2013 na 9:04 Abụ • zaghachi
Nke a bụ nkọwa okwu mara mma. Eziokwu Dị Ọcha. Naanị m chọrọ ka ọ dị mfe icheta kwa ụbọchị. Ana m ahụ onwe m na-echeta eziokwu ndị dị otú ahụ nanị mgbe a kpasuru m iwe, daa, na ịgbagaghachikwute Chineke mgbe m tụkwasịrị onwe m obi ma chọọ afọ ojuju na-abụghị uche Ya.